Ukwelashwa Okusha Kokukhuluphala
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Zocingo » Ukwelashwa Okusha Kokukhuluphala
I-Sciwind Biosciences Co., Ltd., inkampani ye-biopharmaceutical yesigaba somtholampilo egxile ekutholeni nasekuthuthukiseni izindlela zokwelapha ezintsha zokwelapha isifo se-metabolic, namuhla imemezele ukuqaliswa komthamo wesiguli esivivinyweni sayo somtholampilo seSigaba 2b se-XW003 ezigulini ezikhuluphele.
I-XW003 inoveli, ehlala isikhathi eside njenge-glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analog eyakhiwe kwa-Sciwind Biosciences. Kuboniswe ukuthi kuphephile futhi kubekezelelwe kahle, futhi kuncishiswe isisindo esincike kumthamo ekuhlolweni kokuqala kwemitholampilo.
Isivivinyo se-multi-center, randomized, open-label, active-controlled Phase 2b sihlela ukuhlola ukuphathwa kwe-XW003 okungaphansi kweviki kanye ezigulini ezingaba ngu-200 ezinokukhuluphala. Abahlanganyeli ocwaningweni, olwenziwa e-Australia naseNew Zealand, bazophathwa ngemithi yocwaningo kuze kube amasonto angu-26, kulandelwa isikhathi sokulandela samahhala esingamaviki angu-5. Inhloso yocwaningo ukuhlola ukuphepha, ukubekezelelana, kanye nempumelelo yokwelashwa kwe-XW003 ezigulini ezikhuluphele. Idatha ye-top-line ilindeleke engxenyeni yesibili ka-2022. Ngaphezu kwalokho, njengengxenye yohlelo lokuthuthukisa lulonke lwe-XW003, uhlolo oluhlukile ezigulini zaseShayina ezinokukhuluphala nalo luyaqhubeka.
“Sijabule kakhulu ngokuqhubeka nokuthuthuka ngokushesha kwe-XW003 ngokuthuthukiswa komtholampilo. Ukuqaliswa komthamo wesiguli kulesi sikhungo esinezikhungo eziningi, ucwaningo lwamazwe ngamazwe lokwelapha ukukhuluphala kungenye ingqophamlando ebalulekile enkampanini futhi kuwubufakazi obuqinile bokuzinikela nekhono leqembu lethu,” kusho uDkt. Hai Pan, umsunguli kanye ne-CEO ye-Sciwind. “Sizibophezele ekuqhubekeni nokuthuthukisa i-XW003, kanye nabanye abazosebenzisa izidakamizwa epayipini lika-Sciwind, ukuze belaphe izifo ezithinta umzimba, okuhlanganisa ukukhuluphala, isifo sikashukela kanye ne-NASH.”
Umkhiqizo Omusha Usiza Abantu Abanokungabekezelelani Ukudla Bajabulele Ukudla Futhi
I-Apo-Acyclovir Ikhunjulwa Ngenxa Ye-Nitrosamine i-iImpurity
Ezokuvakasha Kwamasiko e-Italy Kuzobuya Isikhathi Esikhulu